Marc Ravalomanana : « Tsy tokony hihemotra ny fifidianana » -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : « Tsy tokony hihemotra ny fifidianana »
23/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Amboarina indray ny lalantsika ». Io ny fanomezan-tokin’ny kandidà ho Filoham-pirenena laharana faha-25 amin’ny bileta tokana, Marc Ravalomanana. Raha ny fanazavan’ity kandidà avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara ity, efa ao anatin’ny fampielezan-kevitra tanteraka ireo kandidà mpifaninana amin’izao fotoana izao, ka vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana izy sy ny ekipany.
Nohamafisin’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, tamin’ny mpanao gazety omaly, teny amin’ny trano fonenany, eny Faravohitra, fa tsy manaiky ny fanemorana ny fifidianana ny tenany, eny, fa na misy tsy tomombana aza ny mahakasika ny asan’ny komity mpanomana ny fifidianana, na ny Ceni sy ny mombamomba ny lisi-pifidianana. « Raha ny mahakasika ny fitakian’ny firaisan’ny kandidà amin’ny fanokafana ny lisi-pifidianana, avy hatrany dia mihemotra ny fifidianana raha toa ka izay no atao.
Ny hirariana fotsiny dia mba hahita vahaolana haingana ny Ceni. Kihon-dalana lehibe eo amin’ny hoavin’ny firenena ny fifidianana, ka tokony izay hahasoa ny vahoaka sy hamerenana ny hasin’ny mpifidy no ifotoran’ny rehetra, ary mba ho tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana satria efa sahirana, ary latsaka an-katerena ny firenena”, hoy i Marc Ravalomanana.
Nomarihiny ihany koa ny mahakasika ilay “Manifesto” na fanomezan-toky fa miainga amin’io avokoa ny fandaharan’asa rehetra hoenti-mampandroso ny firenena. Teboka folo no voarakitr’ity “Manifesto” ity, toa ny famerenana ny fandriam-pahalemana, ny rafitra fitsaboana, ny tetikasa fampianarana, fampitomboana ny fidiram-bola, fananganana fotodrafitrasa, fametrahana ny fitsinjarana sy fanapariaham-pahefana tena izy, famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny mpitondra, fiarovana sy fanatsarana ny tontolo iainana, fanomezan-danja ny soatoavina sy hambom-po Malagasy, ary ny fanatsarana ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ireo mpiray ombon’antoka.
Ankoatra izay, ny fametrahana ny MAP II, izay hoentina amin’ny fanarenana sy fanomezana ainga vao ny toekarem-pirenena, ny famoronan’asa, ary ny fandrosoana sy fampandrosoana.
Tetsy andaniny, nampahafantarina tamin’iny omaly iny ihany koa ireo mpikambana eo anivon’ny vovonana mpanohana ny kandidà Marc Ravalomanana. Nambaran’ny kandidà laharana faha-25 tamin’izany, fa misokatra amin’ny rehetra ny tenany. Izany indrindra no nanangany ireo ekipa miaraka toa ny talen’ny fampielezan-kevitra, izay sahanin’i Rabenja , raha i Serge Zafimahova kosa ny mpandrindra ankapobeny. Mitana ny toeran’ny filohan’ny komity mpanohana (KMMR) kosa i Constant Raveloson, raha ny kolonely Eugène Josoa no misahana ny komity manohana ny fampandorosoana sy ny fahamarinana.